Okuqanjiwe mayelana ne-India | Ukuhamba kwe-Absolut
Emphakathini wanamuhla, umqondo wenkolelo eyeqisayo uya ngokuya ubaluleka ngokwengeziwe. Siphila sizungezwe yibo, bayaphindwa noma bagxekwe ngenxa yokuxhumana kwabo nobandlululo. Ngenye yezingqinamba ezinezimpikiswano ezinkulu ezibuyekezwa unomphela.
Ukuhamba kungumuthi omuhle kakhulu wokulwa nezinkolelo-ze nokucwasana. Ivula izingqondo zethu ngezindlela eziyinkulungwane futhi isenze sikhule ukuvisisa umhlaba futhi, ngokujwayelekile, izinto eziningi empilweni.
Wonke amazwe anemiqondo eyeqisayo. Isibonelo, eNgilandi ukudla kubi kakhulu, ukuthi eFrance bayaziqhenya kakhulu noma ukuthi eSpain wonke umuntu uyakwazi ukudansa i-flamenco. Kwenzeka okufanayo emazweni akude njengaseNdiya. Kepha, Yiziphi izinkolelo ezivame kakhulu mayelana neNdiya?
1 Yini inkolelo-ze?
2 Yiziphi izinkolelo mayelana neNdiya?
2.1 Njalo thatha izinyathelo ngokudla kwaseNdiya
2.2 AmaNdiya angabathakathi bezinyoka
2.3 AmaNdiya ampofu, kodwa ajabule
2.4 I-India inesiphithiphithi futhi ayinakwa
2.5 AmaNdiya akhuluma isiHindi
2.6 Bonke abesifazane baseNdiya bagqoka ama-saris
2.7 Wonke amaNdiya enza i-yoga futhi athi uNamaste
2.8 Izinkomo zizulazula emigwaqweni
Ngokusho kweRAE (iRoyal Spanish Academy) inkolelo ethi "isithombe noma umqondo ovame ukwamukelwa yiqembu noma umphakathi onomlingiswa ongaguquki." Lokho, umbono ojwayelekile wokuthi umuntu angakholelwa ini ngeqembu labantu abanezici, izimfanelo noma isimilo. Lezi zinkolelo-ze zakhiwe emphakathini futhi zinika umbono womlingiswa noma amasiko endawo.
Yiziphi izinkolelo mayelana neNdiya?
Njalo thatha izinyathelo ngokudla kwaseNdiya
Ukudla kwamaNdiya kumnandi! Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi uke wakuzwa kaningi, lokho Uma uhambela ezweni kufanele uqaphele ngoba ungazizwa kabi uma udla ezitaladini zomgwaqo. Eqinisweni, lokhu kuyinto engenzeka noma yikuphi uma sithenga ukudla ezindaweni ezinenhlanzeko engabazekayo noma uma siphuza amanzi angenawo amabhodlela.
Ngemikhombandlela ethile ubuncane, ungakujabulela ukudla kwaseNdiya ngaphandle kokuhlushwa i-gastroenteritis yomhambi owaziwayo noma uhlushwa imfiva embalwa. Akunasidingo sokukhathazeka!
Ngakolunye uhlangothi kunenkolelo yokuthi konke ukudla kwamaNdiya kuyababa. Abantu abaningi abathandi noma banqikaze ukuzama ukudla kwamaNdiya ngoba bakholelwa ukuthi zonke izitsha zinongwe kakhulu futhi kuzobanikeza isisu njengoba bengakujwayele, kepha akukho okuqhubekayo eqinisweni.
Lesi yisifinyezo ngoba akukhona konke ukudla kwamaNdiya okubabayo. Eqinisweni, kunezitsha ezingekho njengoDal Makhani, isobho lentiladi elinongwe nge-coriander entsha. Noma usoso we-korma, uhlobo lukakhari omnene owenziwe ngamantongomane nokhilimu. Asikwazi ukukhohlwa noma isosi ye-raita, eyenziwe ngekhukhamba ne-yogurt ezoqabula noma yisiphi isidlo.
AmaNdiya angabathakathi bezinyoka
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi amaNdiya angabathakathi bezinyoka. Noma kunjalo, iqiniso ukuthi umkhuba wezinyoka ezithandekayo awukho emthethweni kwezinye izindawo ngakho-ke uvinjelwe eNdiya, yize abanye abathakathi bezinyoka besekhona nanamuhla.
AmaNdiya ampofu, kodwa ajabule
Ngenkathi kukhishwa ifilimu iSlumdog Millionaire, ubumpofu babonakala emijondolo lapho kwenzeka khona lesi senzo saba nomthelela omkhulu endleleni iNdiya ebonwa ngayo emhlabeni wonke. Abahambi abaningi bayamangala ukubona isimo sobumpofu abantu abaningi abahlala eNdiya, ebhekene nobunzima bosuku nosuku emamatheka. Kepha ngokungafani nenkolelo evamile, akulona lonke izwe elimpofu.
Abanye babantu abacebe kakhulu emhlabeni bahlala eNdiya futhi ezikhathini zakamuva isigaba esiphakathi esichumayo siyavela ngenxa yokuthuthuka kwezemfundo nokuqashwa. Bayanda abantu ababalekela ubumpofu futhi bafinyelele impilo engcono.
I-India inesiphithiphithi futhi ayinakwa
Yize kungahle kube nezindawo ezihlome kakhulu futhi kwesinye isikhathi isiminyaminya siba nezinxushunxushu, eNdiya njengakuwo wonke amazwe kukhona nezindawo lapho amapaki, amahhotela kanokusho nezindawo zokuthenga, izindawo zokudlela ezinhle kanye nama-nightclub kugcwele imfashini yokuzijabulisa yabantu bendawo nabavakashi.
AmaNdiya akhuluma isiHindi
Le nkolelo-mbono isabalele phesheya. Abantu abaningi bakholelwa ngephutha ukuthi igama elithi "Hindu" lisho inkolo nolimi olusemthethweni eNdiya. Kodwa-ke, akunjalo njengoba lolu limi lubizwa nge-Hindi kanti abasebenza ubuHindu babizwa ngokuthi amaHindu.
Ngakolunye uhlangothi, IsiHindi akusiyona ukuphela kolimi ezweni njengoba isifunda ngasinye sinolimi lwaso. Abahambi abaningi bayamangala ukuthola ukuthi kunamaNdiya angakhulumi isiHindi kodwa kuyiqiniso. Eqinisweni, isi-Hindi asifundiswa kwezinye izikole futhi lokhu kwenzeka ikakhulukazi eNingizimu India lapho kukhulunywa khona izilimi ezivela e-Dravidian.
IsiHindi ulimi olukhulunywa kakhulu eNyakatho India kodwa kumaNdiya amaningi ulimi lwabo lwesibili. IsiNgisi, okwamanje, sikhulunywa kabanzi ezweni lonke.
Bonke abesifazane baseNdiya bagqoka ama-saris
I-sari ingubo yendabuko yabesifazane baseNdiya nesithonjana samasiko. Igama elithi "sari" livela kwaSanskrit futhi lisho ukuthi "indwangu yebhande" ngoba le ngubo yenziwa ngendwangu engenamthungo edluliswa ekhanda bese isonga umzimba wowesifazane njengengubo.
Yisudi enhle, enhle futhi engaphelelwa yisikhathi. Kodwa-ke, abesifazane baseNdiya abagcini ngokugqoka ama-saris njengoba bevame ukugqoka ezinye izinhlobo zokugqoka, zombili ezihlelekile nezingejwayelekile. Isibonelo, ukusetshenziswa kwansuku zonke kunabesifazane abagqoka i-salwar kameez (eyakhiwe ngebhantshi elixegayo namabhulukwe kanye nesikhafu) ikakhulukazi eNyakatho India. Abanye bakhetha izingubo zasentshonalanga emadolobheni amakhulu ezihlanganisa zombili izimfashini.
Wonke amaNdiya enza i-yoga futhi athi uNamaste
I-Yoga ingumkhuba wokuthi, ngokuma okuhlukile nokuzivocavoca umzimba, kuxhuma umoya, ingqondo nomzimba. AmaNdiya azazi izinzuzo zawo emakhulwini eminyaka kepha eNtshonalanga kungalezikhathi zamuva lapho ethandwa kakhulu. Yingakho abantu abaningi bezinye izizwe becabanga ngeNdiya namasiko ayo njenge-mecca engokomoya. Noma kunjalo, akuwona wonke amaNdiya afaka i-yoga empilweni yawo yansuku zonke. Le yinkolelo.
Ngakolunye uhlangothi, yize igama elithi namaste liyingxenye ebalulekile yesiko lezwe, emadolobheni amakhulu okwamanje kubekelwe izimo ezisemthethweni noma ukuxhumana nabantu abadala. Ngaphezu kwalokho, kuvame kakhulu ezindaweni ezisenyakatho lapho kukhulunywa khona isiHindi esihlanzekile kuyilapho kungavamile kakhulu eningizimu yeNdiya lapho isiHindi kungesilo ulimi lokuqala.
Izinkomo zizulazula emigwaqweni
Esinye sezithombe sokuqala esiza engqondweni lapho sicabanga nge-India izinkomo ezingcwele. Ingabe bazulazula ngempela emigwaqweni emadolobheni aseNdiya? Kunjalo, le nkolelo-mbono iyiqiniso. Ngeke kukuthathe isikhathi eside ukuzibona zithatha uhambo kunoma yiliphi idolobha. Bahamba ngokuthula ezimotweni, ngakho-ke abashayeli kumele baqaphele ukugwema izingozi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Okuqanjiwe ngeNdiya
UMfula Ophakeme, imvelo nemidwebo